Dzidza nezvesimba rakavanzika mune Messages app ye macOS | Ndinobva mac
Zviripachena kuti paunonyanya kuziva nezve Mac system, ndipo paunoona zvakanyanya kuti ihurongwa husina kukosha chete zvahuno asi zvakare nekuda kwezvaingave zvakaviga pasi pebhuruu denga uye zvaunogona kuita. Muchikamu chino, ini ndoda kutaura zvishoma nezve chinhu cheMessage app mu macOS yaungangodaro usazive nezvayo.
Kana isu tavhura iyo Messages application tinoratidzwa fafitera iro kuruboshwe kune vanhu vatinokurukura navo pachena uye kurudyi hwindo pacharo kwatinonyora uye nekugovana chero mhando yefaira iyo yatinoona yakakodzera.
Nekudaro, kuva nehurukuro zhinji uye panguva ipi neipi yekutaura kune vanopfuura kamwechete panguva zvinogona kuva zvinonetsa uye isu tinofanirwa kunge tichisarudza hurukuro yega yega mubara repadivi kuti tiise imwe kana imwe uye tigochengetedza hurukuro. Zvinova zvakanyanya kuomarara kana izvo zvatiri kuda kugovana faira rinotipinza mukutaurirana nekumwe kutaura uye izvo nenzira iyoyo tinofanirwa kutanga tachengeta iyo faira uye tobva taiisa munhaurwa nyowani.
Zvakanaka, unogona kurerutsa zvese izvi kana ukamhanyisa-pinda-pinda pahurukuro, nekuti otomatiki uchaona sei Mirayiridzo inovhura hwindo nyowani yekutaura yega yehurukuro iyoyo. Unogona kudzokorora maitiro aya nekutaurirana kwakawanda sezvaunoda uye nekudaro uine akati wandei windows anoonekwa pachiratidziro kuti akwanise kuverenga zvese hurukuro panguva imwe chete.
Zvakare, kana mukutaurirana vakutumira iyo faira, semuenzaniso pdf faira, kana iwe uchida kuigovana kubva kune imwe nhaurirano kuenda kune imwe, ingotinya uye uzvikweze kune iyo hurukuro yaunoda. Pasina kuichengeta, unogona kuigovana nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Dzidza nezve simba rakavanzika mune iyo Messages app ye macOS